Nezvedu - HEBEI YANJIN IMP EXP Co., Ltd.
—— Nezvedu ——
Hebei Yanjin Import uye Export Co, Ltd. ikambani inogadzira, inogadzira uye inotengesa yakavezwa-zvedongo zvedongo tile zvigadzirwa. Iine nhoroondo yeanopfuura makore gumi nemapfumbamwe. Zvigadzirwa izvi zvinosanganisira mhando zhinji dzezvigadzirwa senge kuvaka mataira, mabasa emaoko uye zvishongo. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kuUnited States, Europe, India, Japan, Malaysia, Thailand nedzimwe nyika zhinji pasi rese, uye zvakare zvine mikana mumusika wekushongedza wepamba.
Chii chinonzi ruoko kupendwa mataira?
Mahara akapendwa mataira anonziwo matiki matatu kana ekushongedza mataira. Iro zita rakatangira kubva kuTri Ruvara rwehunyanzvi hweTang Dynasty. Maitiro ekugadzira akaomesesa. Iyo hunyanzvi hwekudhirowa, kumisikidza marongero uye glaze zvese zvinoitwa neruoko. Rudzi urwu rwe ceramic tile irwo mhando yehunyanzvi ceramic handicraft, panguva imwecheteyo, inoyevedza kwazvo imba yekushongedza. Mamwe maitiro akagadziridzwa evatengi, anogona kushandiswa sezvipo zvebhizinesi, kushongedzwa kwemba, zviyeuchidzo zvevashanyi, nezvimwe.
Mhando dzemataira idzi dzinogona kushandiswa pachoto, imba yekugezera, kicheni, imba yekutandarira zvichingodaro
Rudzi rwebhizinesi Mugadziri / Fekitori, Kambani yekutengesa
Mhando Yevaridzi Yakatemerwa Kambani
Mabasa se Kushongedza Kumba kana Chipo
(1) Zvekuvakisa (mataira emadziro)
(2) Kushongedza tafura
(3) Masvingo akarembera
(4) Yakagadzirwa chinhu
(5) Firiji magineti
Rudzi rwePendi Ruoko rwakapendwa (Hwakagadzirwa nemaoko)
Saizi inowanikwa 6x6cm
OEM / ODM Kuwanikwa Hongu
Isu takagadzirira kutanga hukama hwebhizinesi nevatengi pasi rese.
Kana iwe uine chero mubvunzo kana kubvunza, ndapota inzwa wakasununguka kutitumira e-mail. Tichakupindura iwe nekukurumidza sezvazvinogona. Kana paine chero chinhu chatinogona kubatsira, ndapota usazeze kutaura nesu.
—— Exhibition ——